सामाजिक संजालमा बसेर साइबर अपराध गर्नेलाई समात्न बन्ने भयो छुट्टै ब्यूरो — Bhaktapurpost.com
नेपालवाल संवाददाताकाठमाडौँ, १६ जेठ
नेपाल प्रहरीमा २ ब्यूरो थपिने भएका छन् । सरकारले बजेट बक्तब्य मार्फत २ ब्यूरो थपिने बताएको हो । बढ्दो साइवर अपराध नियन्त्रण गर्न र मानव वेचविखनको बदलिदो स्वरुपलाई ध्यान दिई नियन्त्रण गर्न छु्ट्टा–छुट्टै दुईवटा ब्यूरो स्थापना गरिने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए ।
सामाजिक संजालको बढ्दो प्रयोग संगै साइबर अपराध पनि बढ्न थालेपछि सरकारले प्रहरीमा साइवर ब्यूरोको व्यवस्था गर्ने भएको हो । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरि अनेक अपराधले बढावा पाएपछि त्यसको नियन्त्रणको लागि छुट्टै ब्यूरो बनाउनु परेको प्रहरीले बताउदै आएको थियो ।
त्यसैगरी मानव वेचविखन नियन्त्रण ब्यूरो पनि बन्ने भएको छ । मंगलवार संसदमा बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बढ्दो साइवर अपराध नियन्त्रण गर्न र मानव वेचविखनको बदलिदो स्वरुपलाई ध्यान दिई नियन्त्रण गर्न छु्ट्टा–छुट्टै दुईवटा ब्यूरो स्थापना गरिने बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा २ ब्युरो थपिए संगै अब नेपाल प्रहरीको ५ ब्युरो हुने भएको छ । अहिले प्रहरीमा विशेष ब्यूरो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र लागू औषध ब्यूरो रहेका छन् । ब्यूरोको कमाण्ड डिआइजी तहको प्रहरी अधिकारीले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेको छ ।